Annaga nagu saabsan - Shenzhen Jos Technology Co., Ltd.
Guriga > > Nagu saabsan
Shenzhen JOS Technology Co., Ltd waa shirkad aad u khaas ah, oo la asaasay 2012. Shirkadeena waxay ku takhasustay naqshadeynta, horumarinta, soo saarista iyo suuq-geynta alaabooyinka RF sida qalabyada wireless-ka iyo qalabka gudbinta, kontaroolada fogaanta wireless, nidaamka digniinta baabuurta, alaarmiga guriga. nidaamyada iyo qalabyada la xidhiidha.
Waxaan sumcad wanaagsan ku helnay in ka badan 50 waddan oo adduunka oo dhan ah oo aan wali la koreyno dhammaan macaamiisheena. Dalabka OEM/ODM sidoo kale waa la aqbali karaa. Waxaan aqbalnaa in aan ku calaamadeyno summada macaamiisha dhammaan alaabadayada waxaanan ku dhameyn karnaa hal shey oo laga soo bilaabo fikradda macaamiisha ilaa badeecada ugu dambeysa oo diyaar u ah in la iibiyo. Waxaan ku bixineynaa dhammaan dadaalladayada bixinta alaabada tayada leh iyo adeegga iibka ka dib ee ugu wanaagsan si aan ula jeedno markab-guul-guuleysi ganacsi markab lala yeesho dhammaan macaamiisheena.
Kooxdayada R&D ee khibrada leh iyo waaxda wax soo saarka hufan waxay ku takhasustay horumarinta, naqshadaynta iyo soosaarka kontoroolka fogaanta albaabka garaashka, waxaanu soo saarnay in ka badan 1,00 nooc oo alaab tayo leh, kuwaas oo loo heli karo qaybo kala duwan oo dabooli kara baahiyo gaar ah oo kala duwan oo macaamiisha ah. aduunka oo dhan.
Baaraha soo noqnoqda ï¼›Kontoroolka looxsï¼› Falanqeeyaha Spectrum
Alaabtayadu waxay caan ku yihiin Australia, Latin America, Koonfur-bari Aasiya, Waqooyiga Ameerika, Bariga Dhexe iyo Yurub.
Kooxdayada iibka xirfadeed ayaa xallin doona su'aalaha macaamiisha online 24 saacadood;
Dhammaan alaabtayada waxaa la tijaabin doonaa laga bilaabo xilliga naqshadeynta ilaa kulanka ugu dambeeya;